Ikhaya Lamaholide Kanokusho e-Scanno eduze kwaseLago di Scanno - I-Airbnb
Ikhaya Lamaholide Kanokusho e-Scanno eduze kwaseLago di Scanno
Scanno, Abruzzo, i-Italy
U-Iris - BELVILLA unokuphawula okungu-2695 kwezinye izindawo.
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Iris - BELVILLA izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Leli khaya elihle kakhulu lamaholide eScanno elinendawo yokuhlala eyi-1/igumbi lokulala namanye amagumbi okulala ama-2 likucela ukuba ube neholide elinethezekile nelivuselelayo. Ilungele umndeni noma iqembu labangu-9, itholakala eduze nezindawo eziningi ezishisayo futhi iza nengadi enkulu eluhlaza eluhlaza egcwele ifenisha yengadi yokuphumula, ithala lokujabulela ukudlidliza kwasemaphandleni kanye nendawo yokupaka ukuze ugcine izimoto zakho. iphephile futhi ayinakuklwebheka.
Izindawo zokudlela zihamba kancane ngenkathi izitolo ezinkulu zingalandelelwa ku-3 km ukusuka kule ndawo. Hamba uye echibini elimangalisayo laseLago di Scanno eliqhele ngekhilomitha elilodwa kuphela futhi uhlole iHermitage yaseSant'Egidio ku-3 km ukuze ujabulele ubunkulunkulu futhi uphumule emanzini amnandi. I-Museo della Lana ilingana futhi izokuvumela ukuthi ujwayelane nomlando wedolobha. I-Lago di San Domenico ku-5 km ingenye ethandwayo futhi kufanele ivakashelwe ichibi nendawo yokulondoloza imvelo.
Umngane wakho ongu-1 onoboya wamukelekile ukuhlala nawe mahhala.
I-Aeroporto D'Abruzzo iqhele ngamakhilomitha angama-90.
Isakhiwo: Esitezi sokuqala: (Ikhishi(ihobhu, ihhavini, umshini wokuwasha izitsha, ifriji, indishi yokuwashela), Igumbi lokuhlala/igumbi lokudlela(umbhede osofa ababili, i-TV, itafula lokudlela), igumbi lokulala(umbhede okabili), igumbi lokulala(umbhede okabili), igumbi lokugezela(ishawa , indishi yokugezela, indlu yangasese, i-bidet), ithala)
Esitezi sesi-2: (Igumbi lokuhlala(umbhede wosofa oyedwa, umbhede osofa ababili), indlu yokugezela(ishawa, indishi yokuwasha, indlu yangasese, ibhidethi))
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-2,695 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye
Hlola ezinye izinketho ezise- Scanno namaphethelo